भगवती बस्नेत – मझेरी डट कम
मनमा अनेक उमंग बोकेर
अंगअंगमा तरंग भरेर
फागु पनि फुल्यो
चितुचांगे, चाँप, गुराँस फुल्यो
आँगनी, करेसो, कान्ला फुल्यो
वनै फुल्यो, तनै फुल्यो
उभेको छु मजधारमा
डुब्न लागेको घामझै
बडो उत्साहकोसाथ हामी ट्याक्सीबाट उत्रियौं । अमृतले भन्यो, “आज दिन कत्ति उज्यालो, आकाश खुलेको छ, साथीहरू निकै आउँछन आज” ।
“हो त, हिजोसम्म दिन कस्तो थियो, आज मनै उज्यालो पारेको छ मौसमले ।” मैले पनि थपे ।
​ यो उदासी त नयाँ शृष्टि झै लाग्यो छातिभित्र अझै चैतन्यको अवशेष बाँकी छ । टुसाउन सक्ने जीवन बृत्ति बाँकी भएर सुन्य हुनबाट प्रवासमा पनि आफूलाई जोगाए झैँ लाग्छ । प्रत्येक मानिस एक एक वटा रिक्तता लिएर बाँचिरहेको हुन्छ । कोलाहलले भरिएको शहरमा एक्लो छु । जसरी लाखौंलाख ताराहरूको वीचमा भएर पनि चन्द्रमा एक्लो छ । एकान्तमा एक्लै बस्छु कल्पनाले पिरोल्छ ।
रातमा निदाँउन ‘खोज्छु उही यादले तड्पाउँछ ! बिहानीको न्यानो किरणमा अदृश्य मायाको आभास गर्दै आल्हालित हुन्छु ! एक्लै वर्वराउँछु अरुले पागल भन्लान् कि भन्ने डर लाग्छ ।
हरेक साँझ झैँ आज पनि कामको खोजीमा होटेल रेष्टुरेन्ट अनि सुपर मार्केटको गल्ली गल्ली चहारेर लखतरान भए पछि ऋतु डेरा बाहिरको छिँडीमा थचक्क बसकी छे । कोठाभित्र केही साथीहरू उत्तेजक हावभावसँग चर्का चर्की स्वरमा कुराकानी गरेको बाहिरैबाट प्रष्टै सुनिन्थ्यो । पानी पर्ला झैँ आकाश धुम्म थियो । उसको मनमा अनेकौ तर्कनाहरू उकुस मुकुस गर्दै मडारिइरहेको थियो, आकाशको कालो बादल झैँ ! उसलाई डेराभित्र पस्न मन थिएन, पाइलाहरू टक्क अडिएको छ नियतिले डोर्याएको बाटोमा हिड्दै गर्दा उसका आफ्नो विबस्थाको बृत चित्र यसरी सल्बलाउँछ “अनेकौ दु:खका वावझुध ७ बर्ष इजरायल बसेर पनि भनेजस्तो काम नपाउँदा मन सन्तोष हुन सकेन । नेपालको राजनैतिक अस्थिरता, अब्यबस्थित अर्थ व्यवस्था, दण्डहीनताको पराकाष्ट, बेरोजगारीको समस्या, १४ घण्टाको लोड सेडिंगको मारमा आक्रान्त मन आफूले दु:ख पाए पनि छोराको भविष्य बनाउँछु भन्ने आशा बोकेर ग्रीन कार्ड बनाउने लालसमा युरोपतिर भासिएँ ।
हरिबोधनी एकादशी र चित्रसारीको जात्रा
भर्खरै दशैँ, तिहार, छठलाई बिदा गर्दै आँगनको डिलभरि गोदावरी, सयपत्री ढकमक्क फुलेको छ । सरद ऋतु घमाइलो मौसमसँगै एकपछि अर्को गर्दै आएका चाडपर्वले गाउँघरका सबै रमाइरहेका छन् । हरिबोधिनी एकादशीको लागि हजुर आमाले आमालाई तुलसीको मोठ सिगार्न लगाउदै हुनुहुन्छ भने भाउजू खाजाको लागि सकरखण्ड, फर्सी, आलु उसिन्दै हुनुहुन्छ । दाजु बगैँचामा लटरम्म फलेका सुन्तला डालाभरि टिपेर पिँढीमा राख्दै हुनुहुन्छ । बाबा उखुका लाक्राहरू अँगालोभरि लिएर गोठतिर जादै हुनुहुन्छ ।
सूर्यको तेजिलो किरणमा आफूलाई नतमस्तक बनाएर पार्कमा सबैजना न्यानो रापमा मस्त थिए । सडक छेउछाउमा राता पहेला फूलहरू फुलिरहेका थिए । आकाश गहिरो निलो रंगमा टलटल टल्किएको थियो । जाडोको मौसम शुरु भएको छ । बिहानको घमाइलो वातावरणमा बूढाबूढी, आ-आफ्नो दौतारीसँग गफमा मस्त थिए । केटाकेटी मनमौजी उफ्रिदै खेल्दै थिए । एकजना बूढी आमा एक्लै बसेको देखेर म उनको नजिक गएर बसे । उनले निकै अगाडिदेखि आफूसँग कुरा गर्ने मान्छेको खोजीमा थिईन् । म नजिकै बसेर उनको कुरा सुन्न उत्सुक र लालायित देखेपछि उनी फुरुक्क हुदै, आफ्ना अतीतहरू सुनाउन लागिन् । म चाख लिदैँ उसको कुरा सुन्न थाले ।